150w Mmiri Ụlọ Ọrụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 150w Mmiri Ụlọ Ọrụ)
eduziri nnukwu ụlọ ọrụ dị ọkụ 150W na ihe mmetụta
1. mere ka ìhè ọkụ na ihe mmetụta ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. nnukwu ụlọ ọrụ na-emepụta ihe dị mma. Obere na ibu na ibu, ogologo oge na-adịgide adịgide. 4.Die-cast...
150w 150lm / w LED Nkiri Ụlọ ọrụ
150w 150lm / w LED Nkiri Ụlọ ọrụ 1. Mkpụrụ ihu igwe ọkụ 150w ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2. Dira 150lm / w Ụlọ ọrụ na- eme ihe, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ìhè 150w Ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ ihe ọhụrụ mara mma. Obere na ibu na ibu, ogologo...
150w Mmiri Ụlọ Ọrụ 150W Mmiri Ụlọ Ọrụ LED 150w Mmiri Ụlọ Ọrụ LED 150lm / w Mmanu Ụlọ ọrụ 100w Ụlọ Ahịa Ụlọ Ọrụ Igwe Ụlọ Ọrụ Na-ere Ụlọ ọrụ gas 150lm / w Ụlọ ọrụ 150w ìhè